FAQ - Lehibe mahafinaritra fialam-boly fitaovana Co., Ltd.
1. Mpanamboatra ve ianao?
Eny. Mpanamboatra matihanina izahay manokana momba ny fitaovana filalaovana ary mifandraika hatramin'ny taona 2010.
2. Inona ny fe-potoana fandoavanao?
Ny fe-potoana mahazatra amin'ny fandoavam-bola anay dia 30% amin'ny tahiry, ny T / T mandanjalanja alohan'ny handefasana. Ho ohatra santionany, ekenay ny fandoavana amin'ny alàlan'ny PayPal, Western Union, MoneyGram.
3. Manao ahoana ny fotoana fandefasana anao?
Ny fotoana fandefasana dia miankina amin'ny habetsaky ny baikonao ary firy ny firafitra ataontsika. Matetika dia ny 15-30 andro ny fotoana fandefasana. Indraindray mila manitatra ny fotoana fandefasana izahay satria manana baiko lehibe avy amin'ny governemanta. Raha mila santionany ianao dia afaka mamarana izany ao anatin'ny 7 andro raha maika ianao.
4. Inona ny fepetra fiarovana amin'ny vokatrao?
Hodinihintsika ny fenitra fiarovana (ASTM F1487, EN1176, EN71, EN 16630) rehefa mamolavola, mamolavola, mamorona, mametraka ny vokatra. Nahazo mari-pankasitrahana maro avy amin'ny orinasanay sy ny mpanjifantsika ny vokatrao.
5. Azonao atao ve ny mandefa ny vokatra any amin'ny toerako?
Mazava ho azy fa afaka manampy anao handamina ny fandefasana ny firenenao izahay. Fa mazàna dia ataonay ao amin'ny seranan-tsambo akaiky indrindra ny mpanjifa ao amin'ny fireneny izy ireo ary ny mpanjifa dia mandamina ny fandefasana ny seranana mankany amin'ny toerany.
6. Azoko apetraka ve ny tenako?
Eny. Hanome anao ny torolàlana fametrahana amin'ny antsipiriany izahay. Ny mpanjifantsika rehetra dia afaka mametraka ny tenany eo amin'ny kianja filalaovana amin'ny fanampiana avy aminay. Fa ho an'ny kianja filalaovana an-trano lehibe mihoatra ny 200 metatra tora-droa, tsara kokoa raha mangataka amin'ny mpampiasa anay ianao hanampy anao hametraka izany. Angamba ho somary ambonimbony kokoa ny vidiny fa hohafohy kely be ny fotoana.
Raha mila fanazavana fanampiny, miangavy anao hifandraisa aminay ankehitriny!